Dhageyso: Jubaland oo ku dhowaaqday qorshe ay dib ugu qabsaneyso gobolka Gedo - Caasimada Online
Home Warar Dhageyso: Jubaland oo ku dhowaaqday qorshe ay dib ugu qabsaneyso gobolka Gedo
Dhageyso: Jubaland oo ku dhowaaqday qorshe ay dib ugu qabsaneyso gobolka Gedo
Kismaayo (Caasimada Online) – Wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka Jubaland Saleebaan Maxamed Maxamuud oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Gedo ayaa sheegay inuu socdo qorshe ay Jubbaland dib ugu soo ceshaneyso gobolka Gedo.
Wasiirka oo la haday Idaacadda VOA ayaa sheegay in qaabka dib u heshiisiin ah ay doonayaan inay ku soo ceeshadaan gobolka Gedo, isla markaana ay doonayaan in dadka gobolkaas loo sameeyo dib u heshiisiin.
Sidoo kale wasiirka warfaafinta Jubbaland wuxuu sheegay in waxgaradka gobolka Gedo ay ku soo wargeliyeen in maamulkoodii ay diyaar u yihiin in dib loogu soo celiyo.
“Maadaama ay dowlad cusub noo dhalatay, waxaan ku rajo weynahay in sharciyadii dib loogu laabto, hadana waxaa muuqata ififaaladeeda oo waxaa gobolkii dib ugu laabtay masuuliyiintii hore oo lagu soo dhaweeyey Garbahaarey, waxaana socda abaabul xoog leh oo maamulkii sharciga ahaa lagu soo celinayo,” ayuu yiri Saleebaan Maxamed wasiirka warfaafinta Jubbaland.
Wuxuu sheegay in gobolkaas sharci la’aan lagu maamulayey sanadihii lasoo dhaafay oo laga faro maroojiyey Jubbaland, balse dadka deegaanka ay hadda fahmeen in ka mid ahaanshaha Jubaland ay ayaga dan ugu jirto.
Gobolka Gedo ayaa muddo waxaa ka jiray xiisad siyaasadeed, ayadoo gacan ku hayntiisa ay isku hayeen dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan xafiiska Farmaajo iyo maamul goboleedka Jubaland, xiisadaas oo sababtay in Jubaland awood ciidan iyo mid farsamo looga saaro gacan ku heynta gobolkaas.
Hoos ka dhageyso wareysiga wasiirka